WAR CUSUB: ”Berlusconi wuu iibiyey Milan” – Fabio Ravezzani – Gool FM
WAR CUSUB: ”Berlusconi wuu iibiyey Milan” – Fabio Ravezzani
(Milano) 26 Maajo 2016 – Maareeyaha Telelombardia, Fabio Ravezzani ayaa daboolka ka qaaday sheeko uu ku tilmaamay mid ka socota daaha gadaashiisa taasoo khuseeysa iibka AC Milan.
Dalladdan ayaa wada xaajood dhowran oo 35 cisho ah haatan kula jirta maamulka AC Milan iyagoo doonaya inay iibsadaan 70% ka tirsan saamiga Milan, balse Ravezzani ayaa sheegay in horraanba lagu kala baxay arrintaas oo ay kaliya dhiman tahay in lagu dhawaaqo.
Wuxuuna Twitter-kiisa kusoo qoray: “Warkii ugu dambeeyey Milan. Berlusconi wuxuu iibiyey 70%, waxaana lagu dhawaaqi doonaa doorashada kaddib. Waxaana kooxda iibsanaysa dallad ay maamusho dowladda Shiinaha oo ka kooban 7 ganacsade. Waan arki doonnaa. ”
SAWIRRO: Halyeeyadii hore ee AC Milan & Inter Milan oo soo bandhigay koobka CL ee Sabtiga lagu kala baxayo!